Sannadkii 1988-kii markii ay Somalia iyo Itoobiya maxaabiista isdhaafsadeen ayaa la geeyay Muqdisho Uways, waxaana loo lebisay derejada Kornayl. Ka dibna waxa la keenay Somaliland oo xilligaasi dagaal ku dhexmarayay ciidankii Somalia iyo ururkii SNM. Ka dibna maalmo ka hor intii aanay dagaaladu ka qarxin Somaliland ayuu isku dayay inuu raadiyo ninkii Oday Cumar halka uu ku dambeeyey, waxaana loo sheegay in odaygii ciidamada Somalia dileen oo ay ku eedeeyeen inuu u shaqeeyo xabashida iyo qurmis ahaan (magac ay dawladii Somalia ugu yeedhi jirtey SNM) qoyskiisiina u qaxeen Durya Dheer. Oo saldhig u ah urur ka soo horjeeda dawladda Somalia. Arrintani waxay maroora dilaac ku riday Mr. Uways, waxaanu qaadan kari waayay ciidamada dilaya dadkii isaga dhaawiciisa badbaadiyay. Ka dibna xaggan iyo Hargeysa ayuu u soo noqday, balse maalmo ka dib SNM ayaa Burco dagaal ku qaaday. Isaga oo markaasi jooga halka uu imika yahay taliska ciidanka Qaranka Somaliland oo ahayd taliskii ciidankii la odhan jirey 26-aad. Hase yeeshee, Uways wuxuu haddana ogaaday in askarta ka tirsan ciidanka Xoogga ee ay haybta wadaagaan Oday Cumarkii badbaadiyay la doonayo in dhegta dhiiga loo daro. Arrintii ayuu isku dayay inuu ka hortago, balse waxa la yidhi, isna waa qurmis isqarinayee raaciya. Waa la raaciyay. Nasiib wanaag nin ay haybta wadaagaan Uways ayaa arkay isaga oo geedka dilka ku xidhan oo madaxa joonyad loo sii gelinayo, ka dibna qaylo ayuu ninkii kaga tolay waar Uways oo qoladaa maaha. Balse markiiba askarigii madaxa joonyada u geliyay wuu ka dhaqaaqay, kuwii loogu talo galay inay toogtaana rasaastii ayay ku fureen, waxaanay kaga dhacday dhegta midig hoosteeda iyo afka. Balse waa laga joojiyayv intii kale. Balse kuma dhiman Uways, wuxuuna noqday dhaawac. Ka dibna dhakhtarka ciidamada ayaa la geeyay waana la daaweeyey, hadalse laga waa. Si kasta oo loola hadlana wuu aamusan yahay uun. Waxaana loo qaatay inay dheguhu wax noqdeen, waxaana loo qaaday Muqdisho. Halkaasi oo looga sii qaaday ilaa dalka Talyaaniga. Inkasta oo dhakhtaro badan la geeyay, haddana ma hadlee gacantiisa ayuu dadka wax ka weydiiyaa oo uu yidhaahdaa tilmaanta dhagoolaha ah ee “Mee, ama Meeye amaba Meeday”.